Social Media ပေါ်ကို ဦးဦးဖျားဖျား ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Game of Thrones: Final Season ပုံရိပ်များ - MoviesFan Movie News
ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကတော့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပင်တိုင် ထုတ်လွှင့်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ HBO ဟာ social media ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံတချို့ တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တင်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင် ၈ ခုမြောက် Season ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ထဲက သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
New #GoTSeason8 stills!! via @daenerystargaryen
A post shared by Kit Harington (@kitharingtonig) on Feb 6, 2019 at 11:23am PST
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ စာရေးဆရာ George R. R. Martin ရဲ့ A Song of Ice and Fire ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးကို အခြေခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Nikolaj Coster- Waldau, Kit Harington, Liam Cunningham, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams စတဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တခြား သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ထွက်လာခဲ့တဲ့ Game of Thrones: Season 8 ဟာ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
A post shared by Game of Thrones (@gameofthronesnotofficial) on Feb 6, 2019 at 12:22pm PST
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေကို ကြည့်ပြီးရင်း ဆက်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင် တသသနဲ့ စွဲမက်စေခဲ့တဲ့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို အိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်း၊ ခရိုအေးရှား၊ စပိန်၊ မိုရိုကို၊ စကော့တလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ Malta နဲ့ Iceland စတဲ့ နေရာဒေသအစုံမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
New GoT S8 still of Sansa! By Helen Sloan/HBO
A post shared by Sophie Turner ♡ (@sophieturner) on Feb 6, 2019 at 11:55am PST
အခုလို ပုံအသစ်တွေ ထွက်လာခဲ့တဲ့ Game of Thrones: Season 8 ကိုတော့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီးကတည်းက စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လကျမှ အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Season 8 ဖြစ်သလို နောက်ဆုံးပိတ်လည်းဖြစ်တဲ့ ဒီ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို HBO ကနေ စတင်ထုတ်လွှင့် ပြသမှာကတော့ ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို စွဲလမ်းခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်တွေဟာ အခုလို ဦးဦးဖျားဖျားမြင်ရတဲ့ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရင်း ပျော်နေကြသလို၊ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်ထဲမှာ ဘာတွေများ ဆက်ဖြစ်လာကြဦးမှာလဲ၊ ဘယ်လိုများ ဇာတ်သိမ်းသွားမလဲ… ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇာတ်လမ်းတွဲ စလွှင့်တော့မယ့် ရက်တွေကိုလည်း အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ။
Previous Post: Oscar ဆုပေးပွဲရဲ့ ဇကာတင်စာရင်းမှာ သူ့နာမည်မပါလို့ ရှက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Bradley Cooper
Next Post: Jumanji ဇာတ်ကားသစ်ထဲမှာ ပြန်တွေ့ကြရတော့မယ့် Nick Jonas